Umsebenzi kaNkulunkulu eNkathini Yomusa wadonsa iminyaka eyizi-2,000, futhi kuzothatha isikhathi eside kangakanani ukuba umsebenzi kaNkulunkulu wezinsuku zokugcina ususe inkathi endala bese umisa izulu kanye nomhlaba omusha? | IVANGELI LOKUFIKA KOMBUSO
Umsebenzi kaNkulunkulu eNkathini Yomusa wadonsa iminyaka eyizi-2,000, futhi kuzothatha isikhathi eside kangakanani ukuba umsebenzi kaNkulunkulu wezinsuku zokugcina ususe inkathi endala bese umisa izulu kanye nomhlaba omusha?
Okwedlule: Kungani kuthiwa zonke iziprofetho zeNkosi uJesu zigcwalisekile futhi zafezeka ngomsebenzi kaNkulunkulu uSomandla ezinsukwini zokugcina?
UChen Yao, waseTianjin Isakhiwo iLaide sasingenye yezinxanxathela ezinkulukazi zezitolo esifundeni saseJi. UNhlangulana ziwu 30, 2012 wawunguMg…
INkosi uJesu isethembise ukuthi, “noma ubani okholwa kuye ngeke abhubhe, kodwa uyokuba nokuphila okuphakade.” UNkulunkulu uzokufeza kanjani lokho akushilo?
Ngesikhathi uJesu enza umsebenzi Wakhe, waphulukisa abagulayo, wakhipha amadimoni, futhi wenza izibonakaliso nezimangaliso. Kungani uNkulunkulu uSomandla engenzi izibonakaliso nezimangaliso emsebenzini Wakhe?
Kungani uNkulunkulu enza umsebenzi omusha enkathini ngayinye? Kungenxa yaziphi izizathu ngempela ukuba nenkathi entsha?
Uma umsebenzi kaNkulunkulu uSomandla ezinsukwini zokugcina uyindlela yeqiniso, kungani abadala, abefundisi, nabapristi bebandla bengayamukeli?
Kungani kuthiwa zonke iziprofetho zeNkosi uJesu zigcwalisekile futhi zafezeka ngomsebenzi kaNkulunkulu uSomandla ezinsukwini zokugcina?